समाचार ( दाङ )
समानताका लागि, असमान बजेट नगरवासीलाई कलेजमा ५० प्रतिशत छुट ‘गाउँपालिकाको विकासले गति लिन्छ’ मुक्तकमलरीको भवन निर्माण घोराही उपमहानगरपालिकाको ९१ प्रतिशत प्रगति
घोराही, २५ भदौ - देश सङ्घीयतामा गएसँगै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यासमा केही मात्रामा सकारात्मक काम भएका छन् । तर स्थानीयसरकारले लैङ्गिक समानताका लागि सामाजिक समावेशीकरण क्रियाकलाप समावेश गरे पनि उल्लेख्य बजेट छुट्याउन सकेका छैनन् ।
लमही, १६ भदौ - तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने तुलसीपुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा नगरभित्रका विद्यार्थीलाई शुल्कमा छुट दिइने भएको छ । तुलसीपुरलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रमा रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुन थालेको कलेजमा यो वर्ष वन विज्ञानको तीनवर्षे कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेको शिक्षा शाखा प्रमुख भाष्करराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
भक्तपुर, १ भदौं -प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पश्चिम दाङमा रहेको बबई गाउँपालिकाको विकासले तीब्रता पाउने बताउनुभएको छ । बबई गाउँपालिका–५ को पदमपुरमा निर्माण गरिएको बहुउद्देश्यीय सभाहलको शनिबार उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले गाउँपालिकाभित्र हुने सभा, सम्मेलनलगायतका कार्यक्रममा उपयोग हुनुका साथै विपद्का बेलामा जनतालाई ओत लाग्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।
घोराही, २७ साउन - मुक्तकमलरीले झण्डै रु एक करोडको लगानीमा आफ्नै भवन निर्माण गरेका छन् । नेपाल सरकार तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत ८० लाख, मुक्तकमलरी विकास मञ्चको रु आठ लाख ८८ हजार लागत र मुक्तकमलरी विकास मञ्चको आन्तरिक कोषबाट रु आठ लाख ३८ हजार गरी कूल रु ९७ लाख २७ हजार ७१ मा साढे तीन तले भवन निर्माण गरिएको मुक्तकमलरी विकास मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको ९१ प्रतिशत प्रगति
दाङ, २३ साउन-दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा तय गरेका कार्यक्रम तथा बजेटमा झन्डै ९१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ  । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चालू र पुँजीगत गरी ९० दशमलव ६६ प्रतिशत काम भएको दाबी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ  ।
जनप्रतिनिधिको सवारीसाधनप्रति मोह
साउन १८,दाङ - लामो समयसम्म देशभर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रह्यो । झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमा जितेर आएका राजनीतिक दलका नेता अधिकांश सुविधा भोगी देखिएका छन् ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाद्वारा सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना
लमही, २ साउन – दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच पु¥याउनका लागि सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
निर्माणको निर्धारित समय सकिसक्दासमेत पुल नबन्दा समस्या
असार २७, दाङ - दाङका अधिकांश खोला तथा नदीहरुमा पुल निर्माणको काम चलिरहेको छ । कतिपय खोलाहरुमा निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण पुल निर्माणको काम लथालिङ्ग अवस्थामा छ भने पुल निर्माणको सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म निर्माणले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
असार १८, दाङ - दाङका ज्येष्ठ नागरिकले सरकारले आफूहरुलाई स्वास्थ्य, यातायातलगायतका क्षेत्रमा दिएको सहुलियत उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले मङ्गलबार तुलसीपुरमा ज्येष्ठ नागरिकसँग गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्ने ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारको सहयोगमा दाङक दुई स्थनीय तहमा सभागृह
भक्तपुर, १६ असार(निर्माण)-दाङको गढवा गाउँपालिकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माणको काम शुरु भएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारको बजेटबाट गढवा गाउँपालिका–५ को मगहरचोकमा सभाहल निर्माण हुन लागेको हो ।
दाङ : ७ गाउँपालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि र राजपुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन
दाङ, १३ असार – दाङ जिल्लाका १० स्थानीय तहमा ७ वटा गाउँपालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढि, करिब ५४ करोड बराबरको बजेट पेश गरेको छ भने राजपुर गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम, २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्वा चौधरीले मंगलबार ५३ करोड ८२ लाख ६६ हजार ८ सय १० रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेश गर्नुभएको हो ।
असार ८, दाङ (नयाँकाम)- दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ७ ले वडाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झुल वितरण गरेको छ । दाङमा पनि लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने डेंगु रोगको जोखिम रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई झुल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष टोपबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
असार ७, दाङ (अनुगमन)- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ हेमन्तपुरस्थित स्मृति आवासीय विद्यालयको अनुगमन गर्नुभएको छ । द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउँदै आएको उक्त विद्यालयको उहाँले आज अनुगमन गर्नुभएको हो ।
तुलसीपुर, ३ असार - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ की ५८ वर्षीया मैती चौधरी आजभोलि निकै खुशी हुनुहुन्छ । उहाँलाई आफ्नै छोराबुहारीले विगत केही वर्षदेखि घरमा बस्न नदिएर निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो ।
विकट गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा : जहाँ पशुलाई झारफुक
लमही, ३ असार - सरकारको एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षाको अवधारणाअनुसार दाङको राजपुर गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको छ । दाङको विकट गाउँपालिकाको रूपमा रहेको राजपुरमा पहिलोपटक प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको हो ।
पाँचौँ नगरसभा - सडकलाई निरन्तरता, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा प्राथमिकता
जेठ ३२,दाङ - घोराही उपमहानगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभामा प्रमुख नरुलाल चौधरीले शनिबार उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको सडक सञ्जाल विस्तारलाई निरन्तरता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइको कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वडादेखि उपमहानगरको केन्द्रसम्म जोड्ने एक÷एक बाटो कालोपत्र गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, कृत्रिम जलाशय निर्माणलाई निरन्तरता दिने, सिँचाइ सुविधा नभएको स्थानमा डिपबोरिङ, साना पोखरी, फोहोरा सिँचाइ र थोपा सिँचाइको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
३१जेठ, दाङ - दाङको देउखुरीमा वन डिभिजन कार्यालय लमहीले वनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन शुरु गरेको छ । देउखुरीका चार पालिका क्षेत्रमा रहेका १४८ सामुदायिक वनमध्ये १७ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना शुरु भएको डिभिजन वन कार्यालय लमहीले जनाएको छ ।
गाडी खरीदमा रु साढे तीन करोड खर्च
दाङ,१७ जेठ – दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु साढे तीन करोडको खर्चमा गाडी खरीद गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्र खरेललेका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि रु तीन करोड ४५ लाख ३५ हजार ७९६ मूल्य बराबरका गाडी खरीद गरिएको हो ।
अपराधीको विवरण वडामा
दाङ,८ जेठ – जिल्ला अदालत दाङले कैद भुक्तान गर्न र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका एक हजार ७९० अपराधीको नाम ठेगानासहित स्थानीय तहमा विवरण पठाएको छ । सेवा प्रवाहमा उनीहरुको पहिचान गर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवा नदिन अदालतले सम्बन्धित उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडामा पत्र पठाएको हो ।
राजपुर गाउँपालिकाद्वारा सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
दाङ,७ जेठ – दाङको राजपुर गाउँपालिकाले सुत्केरीलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क गरेको छ । जिल्लाको विकट क्षेत्र मानिने राजपुरमा घरमै बच्चा जन्माउने प्रचलन अझै नहटेकाले सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न प्रोत्साहन गर्न निःशुल्क गर्न थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताउनुभयो ।
बालश्रम र विवाह न्यूनीकरण गर्न उपमहानगरपालिकाले थालेको अभियान प्रभावकारी बन्दै
दाङ, २२ वैशाख – मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू भएपछि दुर्गम बस्तीका जनता लाभान्वित हुन थालेका छन् । विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका जिल्लाका तीन गाउँपालिकाले सो कार्यक्रमलाई स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा तुलसीपुरका १३ विद्यालयका कक्षा स्थगन
लमही, १९ बैशाख – दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिअनुसार १३ विद्यालयको कक्षा स्थगन गरेको छ । न्यून विद्यार्थी भएका तुलसीपुरका १३ वटा आधारतभूत विद्यालयको कक्षा स्थगन गरेको हो ।
७० वर्षमा सक्रिय महिला जनप्रतिनिधि
लमही, २ वैशाख – दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ का वडासदस्य धनकुमारी भुसाल आउँदो जेठमा ७० वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ । तुलसीपुरको नगरसभामा उहाँ नै सबैभन्दा वृद्ध महिला सदस्य हुनुहुन्छ ।
तुल्सीपुर उपमहानगरद्धारा मातृभाषामा शिक्षा दिन विधेयक पारित
लमही: दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मातृभाषामा शिक्षा दिन विधेयक पारित गरेको छ । यससँगै अब उपमहानगरपालिकाभित्रका कक्षा १ देखि ५ सम्म कुनै पनि विद्यालयले मातृभाषामा शिक्षा दिने बाटो खुला भएको छ ।
गाउँपालिकाद्वारा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता
लमही, २२ चैत – दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीका अनुसार गाउँपालिकाका ९७ गाउँमध्ये ९४ गाउँमा सडक पुगेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारद्वारा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न रकम विनियोजन
नारायणपुर, १८ चैत – प्रदेश नं ५ स्तरीय ट्रमा सेन्टर दाङको लमहीमा स्थापना हुने भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सडक दुर्घटना बढी हुने भएकाले सोलाई मध्यनजर राखेर ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्न थालिएको प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले जानकारी दिनुभयो ।
दाङ, १४ चैत -नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विगतका क्रान्तिलाई सिरानीमा राखेर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले अराजनीतिक गतिविधि गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० तुलसीपुर उपमहानगर कमिटीको शपथग्रहण तथा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा उहाँले विगतका क्रान्तिसँग अहिले सो समूहको अराजनीतिक गतिविधिलाई तुलना गर्न नहुने बताउनुभयो ।
लमही, १० चैत -दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वृद्धवृद्धाको अनुभव सुन्न थालेको छ । वृद्धवृद्धाको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुका साथै पुराना पुस्ताको संस्कार र संस्कृति नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन वृद्धवृद्धाको कुरा सुन्न थालिएको हो ।
उपमहानगरका केन्द्रीय योजनाहरु नगरप्रमुख पाण्डेद्धारा सभामुख महरालाई हस्तांतरण
तुलसीपुर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले सभामुख कृष्णवहादुर महरालाई तुलसीपुर क्षेत्रका केन्द्रीय योजनाहरु बुझाउनु भएको छ । नगरप्रमुख पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा योजनाहरु समावेश गर्नका लागि आग्रह स्वरुप योजनाहरु पेश गर्नभएको हो ।
लमही, ४ चैत : दाङको दुई गाउँपालिकाको सीमामा उत्खनन विवाद छलफलबाट टुङ्ग्याइएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न गरेको ठेक्का आह्वान गरेको क्षेत्र गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भनेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाद्धारा विकट वडाको स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स
दाङ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकट वडालाई लक्षित गरेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । उपमहानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडामा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ वटा वडामा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
आँखा जोगाऔँ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
दाङ, १ चैत - प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले संसार देखाउने आँखाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ पवननगरको वीरेन्द्र मावि भ्यूडहर, सुनपुरमा भएको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा उहाँले आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
घोराही -घोराही उपमहानगरको वस्तुस्थिति समेटिएको नगर प्रोफाइल बिहीबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको छ । नगर प्रोफाइलको प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
गाउँपालिकाद्धारा दाङ,को पुरन्धरा जाने बाटामा कल्भर्ट निर्माण शुरु
दाङ, ३० फागुन -पश्चिम दाङको पर्यटकीयस्थल पुरन्धरा झरनाजाने बाटोमा पर्ने कालीखोलामा कल्र्भट निर्माण शुरु गरिएको छ । बबई गाउँपालिका–५ मा पर्ने सो खोलामा रु १२ लाखको लागतमा त्यहाँ कल्र्भट निर्माण शुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सक्रियतापूर्वक काम गर्ने महिलाहरुलाई सम्मान गदैँ उपमहानगरपालिका
काठमाडौँ, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका महिलाहरुलाई आज सम्मान गर्ने भएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा समाजमा अग्रणी भुमिका खेलेका महिलाहरुलाई उत्प्रेरणाका लागि सम्मान गर्न लागिएको उपप्रमुख माया आचार्यले बताउनुभएको छ ।
नवीन नेपाली /नारायणपुरदाङकै विकट गाउँपालिका बंगलाचुली २ टाकुराका स्थानीयवासीलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बजारबाट बोकेरै ल्याउनुपथ्र्यो । गाउँका बिरामीलाई समेत बोकेर ल्याउने लैजाने गर्नुपर्ने समस्याबाट पीडित थिए टाकुरावासी ।
पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको‘गौरीगाउँ’लाई पर्यटनको केन्द्र बनाइँदै
लमही, १७ फागुन - दाङकै पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० को गौरीगाउँ ताललाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन थालिएको छ । एकै स्थानमा सात ताल रहे पनि प्रचारप्रसारमा ओझेलमा परेको भन्दै उक्त ताललाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन शुरु गरिएको हो ।
तुलसीपुर, १० - फागुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अबको तीन वर्षभित्र देशैभर विद्युत् विस्तार हुने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब दाङ शाखाले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले नेपालको पानी र जनताको लगानीलाई सार्थक तुल्याउने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
दाङ, प्रदेश नं ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश राजधानी खुल्ला स्थानमा तोकिने बताउनुभएको छ । दाङको तुलसीपुरस्थित जनकल्यान माबि दूधरासको ६८औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शहरी क्षेत्रको भीडभाडमा भन्दा पनि खुल्ला ठाउँमा राजधानी तोकिने बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाकाे सहकार्यमा बालविवाह रोकिदै
लमही, ५ फागुन -पुजारीले मन्दिरमा उमेर नपुगी विवाह गर्न आएका जोडीको विवाह रोक्दै आएका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने योजनाअनुसार बालविवाह न्यूनीकरण गर्न मन्दिरका पुजारीलाई अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गरेपछि पुजारी नै बालविवाह रोक्न सक्रिय बनेका हुन् ।
मेनका चौधरी /धम्बोझीप्रदेश नं ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमामा रहेका बर्दियाको करीब सयौँ बिघा जमीनमा विवाद भएको छ । बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाबीच जमीनको विवाद छ ।
प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था बुझ्दै : मन्त्री बराल
लमही, २० माघ :प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले आज दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल अनुगमन गर्नुभएको छ । उहाँले अस्पतालको भौतिक स्थिति तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत अस्पताल विकासका सम्भाव्यताबारे जानकारी लिनुभयो ।
प्रदेश नं ५ नगर प्रमुखको भेला दाङमा
लमही, २० माघ : प्रदेश नं ५ का १७ नगरका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरु दाङको तुलसीपुरमा भेला भएका छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा तुलसीपुरमा शुरु भएको स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनासम्बन्धी दुईदिने अन्तर नगरपालिका सिकाइ कार्यक्रममा सहभागी हुन उहाँहरु तुलसीपुर आउनुभएको हो ।
मोतियाविन्दुरहित बन्दै गाउँपालिका
तुलसीपुर, १८ माघ :दाङको गढवा गाउँपालिकाले ८९ जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गराएको छ । गाउँपालिकालाई मोतियाविन्दुरहित गाउँपालिका बनाउने अभियानअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा आँखा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरी आँखामा देखिएको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।
वडा कार्यालयद्धारा पशु सुत्केरी भत्ता वितरण
लमही, १४ माघ :दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८मा पशु सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनुका साथै विपद् पीडितका परिवारलाई राहत पनि वितरण गरिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ हेमन्तपुरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा वडा कार्यालयले पहिलो पटक पशु सुत्केरी भत्ता वितरण शुरु गरेको हो ।
तुलसीपुर प्लाष्टिक झोलामुक्त उपमहानगर
दाङ, १३ माघ :तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्वाच्छ वातावरणमैत्री नगर वनाउनका लागि प्लाष्टिक झोलामुक्त अभियान सुरु गरेको छ । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेका अनुसार प्लाष्टिकले वातावरण प्रदुषण हुनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भिर असर पार्ने भएकाले यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
दाङका ६ गाउँ बने स्मार्ट कृषि गाउँ
तुलसीपुर - प्रदेश सरकारले कृषिको पकेट क्षेत्र विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत दाङका ६ गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँमा परिणत गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको समन्वयमा एक सांसद एक कृषि गाउँअन्तर्गत ६ गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउन लागिएको हो ।
दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा चिकित्सक अभाव
लमही -दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा चिकित्सक अभाव रहेको छ । सोह्र विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले छ मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत रहेको अस्पतालका निमत्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सर्वेश शर्माले बताउनुभयो ।
काठमाडौं - प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीको मुख्य फरक फरक भेटिएपछि लेखा समितिले गरेको अनुसन्धान तथा छानवीनवाट कानुन बमोजिम नै गाडी खरिद गरेको भएपनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ । लेखा समिति अन्र्तगतको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो निश्कर्ष निकालेको भएपनि लेखा समितिको बैठकले उपसमितिको मागअनुसार थप अध्ययन गर्नका लागि समितिमा रेवतीरमण शर्मा, बसिउद्दिन खान र गीता थापालाई थप गरेको छ ।
उपमहानगरद्धारा सडक विस्तार
तुलसीपुर, ६ माघ - तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २० वर्षसम्म विस्तार हुन नसकेका सडक विस्तार गर्न लागेको छ । तुलसीपुर–१ को धनुवासमा पुगेको सडक विस्तार गरेर उपमहानगरपालिकाले सल्यानको मखनटाकुरीसम्म पु¥याउन लागेको हो ।
तुलसीपुर उपमहानगर माघ १ गतेबाट प्लाष्टिक झोलामुक्त घोषणा
दाङ - दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले माघ १ गतेबाट उपमहानगरलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त घोषणा गरेको छ । उपमहानगरले पहिलो चरणमा २० माइक्रोनभन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका झोला प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ भने प्लाष्टिकका गिलास, थाल, प्लेट र कचौरा समेत प्रयोग गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
प्रदेश नम्वर ५ सरकारले माघी पर्वमा २ दिन विदा दियो
वुटवल– पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले पनि माघी पर्वको अवसरमा २ दिन प्रदेशभर ार्वजनिक विदा दिएको छ । प्रदेश ५ का विभिन्न् जिल्लामा धुमधामका साथ माघी मनाइन्छ ।
लमही, २९ पुस - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दाङका १० स्थानीय तहलाई दुर्गम, सुगम र मध्यम स्तरमा वर्गीकरण गरेको छ । स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार बङ्गलाचुली र राजपुर गाउँपालिका दुर्गममा परेका छन् भने घोराही उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सुगममा परेका छन् ।
नारायणपुर -लक्ष्मीपुर स्यालापानीकी बेली विष्ट आफ्नो बिहे हुँदा कपाल बाट्न जान्नुभएको थिएन । १३ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी बेली ६२ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा रोग पालेर बस्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकाद्वारा तीन कार्यवधि पारित
दाङ, २७ पुस - दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाले तीन कार्य्विधि पारित गरेको छ । बिहीबार सकिएको हिउँदे अधिवेशनले ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्य्विधि, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्य्विधि, एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्य्विधि पारित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले बताउनुभयो ।
उपमहानगरको न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद धेरै
नारायणपुर, २० पुस - दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गाको विवाद बढी देखिएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म समितिमा १३८ वटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको समितिका संयोजक तथा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले बताउनुभयो ।
दाङका तीन गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रम
लमही, १९ पुस -दाङका तीन गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्लाका बबई गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यक्रम सहजकर्ता श्रीधरकुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो ।
लमही, १६ पुस - प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विद्यालय र समुदायको सम्बन्धलाई थप समधुर बनाउन बनाएको योजना अनुसार प्रदेश नं ५ मै पहिलो पटक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट कार्यक्रमको शुरुआत भएको छ । उक्त कार्यक्रमको सिलसिलामा प्रदेश नं– ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल, प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेलगायत अन्य अतिथि उपमहानगरपालिकामा रहेको विद्यालयमा पुग्नुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाको ‘न्यायिक समितिमा उपलब्धि बढ्दै’
घोराही, १६ पुस । घोराही उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा भए गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
दाङमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको घोषणा
दाङ -दाङमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको घोषणाप्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले घोषणा गर्नुभएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आइतबार आयोजना गरेको तुलसीपुर आर्थिक विकास सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आर्थिक विकास सम्मेलन गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
दाङ, १५ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्थानीय आर्थिक विकासका सम्भावना खोज्नका लागि वृहत आर्थिक विकास सम्मेलन आयोजना गर्दैछ ।
तुलसीपुर, ८ पुस - सङ्घीयता कार्यान्वयन सघैँ यहाँको उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय स्वास्थ्य ऐन तथा स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको स्वास्थ्य ऐन तथा नीति नगरसभाबाट समेत पारित गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकामा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि अनुमति प्राप्त
तुलसीपुर, ५ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रबाट प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएको छ ।
उमा केसी/रोल्पास्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा कतै बढी मुद्दा परेका छन् भने कतै निकै कम । पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पहिलो एक वर्षमा दुईवटा मात्र उजुरी परेका थिए ।
लमही, ४ पुस - दाङमा तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका लागि १३ वटा योजना छनोट भएका छन् । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका संयोजक रामहरि शर्माका अनुसार दाङका १३ वटा योजनाका लागि रु सात करोड ७५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम : १३ योजना छनोट
लमही, ४ पुस - तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमका अन्र्तगत दाङमा लागि १३ वटा योजना छनोटमा परेका छन् । १३ वटा योजनाका लागि ७ करोड ७५ लाख बजेट रहेको तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमका संयोजक रामहरि शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशमा खानेपानी समस्या समाधानमा लागिपर्छु :मन्त्री चौधरी
लमही - प्रदेश नं ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सबै घरमा खानेपानी पु¥याइने बताउनुभएको छ । दाङको बबई गाउँपालिका–५ को सिमगैरा खैरभट्टी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले कुनै पनि नागरिक खानेपानीबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाको सहयोगद्धारा आम्दानीको स्रोत बन्दै कृत्रिम जलाशय
घोराही, २७ मङ्सिर । कुनै समय एक गाग्रो पानी ल्याउन र गाईभँैसीलाई पानी खुवाउन एक घण्टा परको कटुवाखोलासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता अहिले घोराही–१७ का बासिन्दालाई हटेको छ ।
नारायणपुर, २७ मङ्सिर । दाङको लमही नगरपालिकाले वेवसाइट पछि अहिले मोबाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
घोराही, १९ मङ्सिर - घोराही उपमहानगरपालिकाले महामारी रोग तथा प्रकोपजन्य रोग निवारणका लागि तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’ नाम दिएर एउटा समिति बनाएको छ । उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले जनस्वास्थ्य प्रर्वद्धन समितिका संयोजक खोपीराम चौधरीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उक्त समिति बनाएको हो ।
घोराही, १९ मङ्सिर - हापुर–५ का श्रीलोचन लामिछाने निजी वनका पारखी हुनुहुन्छ । उहाँले घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरमा रहेको आफ्नो १०१ कट्ठा जग्गामा वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ।
घोराही, १७ मङ्सिर - दाङमा प्रदेश नं ५ ले पूर्वाधार विकास कार्यालयको स्थापना गरेको छ । गत मङ्सिर २ गते कार्यालय स्थापना भएसँगै प्रदेशको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास नाम दिएर बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहको मनोमानी : प्रतिपक्ष निरीह
दाङ- तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै वस्तु निकासी कर असुलिरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने नारा दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि उपज तथा पशु निकासीमा नै कर लगाएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा वडाध्यक्षको निधन
दाङ - घोराही उपमहानगरपालिका–१६ का अध्यक्ष लक्षिण बुढामगरको निधन भएको छ । बुढामगरको ब्हिीबर बिहान घरमै निधन भएको हो ।
दाङमा सडक र पुल निर्माणको लागि छुट्टै कार्यालय
दाङ– दाङमा सडक र पुल निर्माणका लागि छुट्टै कार्यालयको स्थापना भएको छ । प्रदेश नं. ५ ले पुर्वाधार विकास कार्यालय नाम दिएर छुट्टै कार्यालयका स्थापना गरेको हो ।
विकासलाई समृद्धिसँग जोड्न आग्रह
दाङ - प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकासलाई समृद्धिसँग जोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–७ मा नवनिर्मित वडा कार्यालय भवनको आज उद्घाटन गर्नुहँुदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले देशमा समृद्धि ल्याउन आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकासका कामलाई पनि समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बबई गाउँपालिकाका सबैका घर घरमा धाराहरू पुर्याउँदैछौ : अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल
दाङ, ६ मंसिर-दाङका १० स्थानीय तहमध्ये बबई गाउँपालिका जिल्लाकै पश्चिम गाउँपालिकामा पर्छ । निर्वाचनको बेला ४५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्दै निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्नुभएको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल ब्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागिपर्नु भएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले थाल्यो फोहोरबाट ग्यास उत्पादन
घोराही, ४ मंसिर-घोराही उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । एक वर्ष भित्रै ग्यास उत्पादन गर्ने गरी उपमहानगरले नेपाल ऊर्जा विकास कम्पनी प्रालिलाई २० वर्षका लागि जिम्मा दिएको छ ।
दाङका बाढीपीडितको कन्तबिजोग
लमही, ४ मंसिर-दाङका बाढीपीडितको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ । वर्षौ बित्तिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा बाँसैबाँसका टहरा बनाएर पीडित बस्न बाध्य छन् ।
उपमहानगरपालिकाद्धारा यातायात व्यवस्थापन शुरु
तुलसीपुर, ३ मङ्सिर - तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अहिले यातायात व्यवस्थापनमा लागेको छ । पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था नहुँदा र साँघुरो सडकका कारण यातायात व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएकाले प्रदेश सरकारले शुरु गरेको हर्न निषेध अभियानमा समेत चुनौती थपिएको छ ।
उपमहानगरको समन्वयमा घरदैलोमै सेवा
तुलसीपुर, १ मङ्सिर । दाङको दुर्गम वडा घोराही उपमहानगरपालिका–१९ सैघाका स्थानीयवासी दैलोमै पहिलोपटक सबै सेवा पाउँदा खुशी भएका छन् ।
घोराही, २५ कात्तिक - पहिले घरमै खानका लागि च्याउ खेती गर्दै आउनुभएकी धनमाया बुढाले अहिले व्यावसायीक रुपमा च्याउ खेती गर्न थाल्नु भएको छ । पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिने भएपछि बुढा च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुनु भएको हो ।
प्रदेश नम्वर ५ : चार सडक मर्मत गरिँदै
लमही, २० कात्तिक । प्रदेश नम्वर ५ अन्र्तगतका सडकको मर्मत सुरु भएको छ ।
तुलसीपुर, १८ कात्तिक - तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आधुनिक फलफूल तथा तरकारी बजार भवनको निर्माण गर्ने भएको छ । तुलसीपुर उपमहागनरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले शनिबार भवनको शिलान्यास गदै भवन निर्माणसँगै अब सडकमा फलफूल तथा तरकारी बिक्री गर्ने कार्य अन्त्य हुने बताए ।
दाङ, ११ कात्तिक - दाङको लमही नगरपालिका–८ भैस्कोर्माका थारू समुदायका महिलाले सामूहिक रूपमा खोलेको दुना–टपरी उद्योग यतिखेर फस्टाउँदै गएको छ । ६ वर्ष पहिले स्थानीय पाँच थारू समुदायका महिलाले जनही रु दुई हजार लगानी गरेर सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरेको दुना–टपरी उद्योगले अहिले लाखाँै रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएको छ ।
घोराही, ९ कात्तिक - शहरीकरण बढेर खाली जग्गा घटेसँगै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई फोहर व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले भने त्यही फोहरलाई मोहर बनाउने तयारी थालेको छ ।
विकास र समृद्धिका लागि सबैको साझा एजेण्डा हुनुपर्ने
तुलसीपुर, ६ कात्तिक । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साझा एजेण्डा हुनुपर्ने बताए ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता - मुख्यमन्त्री पोखरेल
तुलसीपुर, २९ असोज । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
निजीका विद्यार्थी सामुदायिकमा आकर्षित
तुलसीपुर, २३ असोज - तुलसीपुर–४ रक्षाचौरस्थित सामुदायिक गुरुजजुर माध्यामिक विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ । जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव रहेको अवस्थामा सो विद्यालयमा विद्यार्थी चाप थेगिनक्नु छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष सुरु
तुलसीपुर, २ असोज । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्तनपान कक्ष सुरु गरेको छ  ।
विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोशाक
घोराही, २ असोज । घोराही उपमहानगरपालिका २ नं. वडाले रात्रि प्रावि पलासेका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क विद्यालय पोशाक वितरण गरेको छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३२ करोडको बजेट
बंगलाचुली, २७ भदौ । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि ३२ करोड ८० लाख २५ हजार रकमको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घोराही उप–महानगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ४९ करोड
दाङ, १९ भदौ । घोराही उप महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि १ अर्ब ४९ करोड, २६ लाख, ८३ हजार को बजेट निमार्ण गरेको छ ।
दाङ, १२ भदौ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ ।